Metal Laser osise Machine, Plywood CO2 Laser cutter - Shenya
Na-agabiga ọkwa nyocha na mmepe nke teknụzụ
Ngwaahia; enyịn, ọkachamara; ihe eji eme ihe; mmepụta ọgụgụ isi
Anyị na-achọ ndị na-ere ahịa ahịa na ndị mmekọ n'ụwa niile
Ọgụgụ isi Production
Factory kpọmkwem ahịa, elu-nkenke ngwaahịa, elu ọgụgụ isi, mma na inogide.
SHENYA CNC etinyewo aka na nyocha, mmepe na mmepụta nke ngwaahịa CNC nwere ọgụgụ isi dị ka akara, ịkpụcha na ịcha ihe. Site na mgbalị anyị na-enweghị mgbagha, Shenya CNC emepeela ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ nrụpụta mba ụwa ugbu a. Ngwaahịa ndị nwere oke ziri ezi, ọgụgụ isi dị elu, nchekwa na nkwụsi ike ya na nnukwu usoro nnwere onwe na-enweghị nsogbu na-arụ ọrụ nke ọma na nlezianya zuru oke mgbe arụchara ọrụ, enwetawo ọnọdụ kachasị maka Shenya CNC na ụlọ ọrụ
Ọla kọpa ọla
Igwe anaghị agba nchara efere tingcha
Osisi Osisi Laser
Kedu ihe ndị kwesịrị ekwesị maka igwe ejiji laser
Kedu ihe ndị dị mma maka igwe ihe nchacha laser Mụọ igwe nke laser ọnwụ bụ tumadi iji melite arụmọrụ na ịcha oke. Ma akwa arụmọrụ na oke nkenke dị anya site na ihe mmadụ o ...
Gịnị bụ ihe ndị na-emetụta ihe osise laser?
Gịnị Bụ Ihe Na-emetụta Ọkpụkpụ Laser? Lasers nwere ike ịrụ ọtụtụ ụdị machining. Dị ka elu okpomọkụ ọgwụgwọ nke ihe, ịgbado ọkụ, ịcha, ọkpọ, ịkpụ na micromachining. CNC laser osise igwe proc ...
Ndị ahịa America nwetara Iwu Mbụ
Ndị ahịa America nwetara usoro izizi na Eprel 26, anyị nwetara ụdị ajụjụ ahụ n'aka onye ahịa ndị America bụ Mazi Fip. Ahịa chọrọ: you nwere ike ịnye m ọnụego maka otu igwe, nyefee n'ọnụ ụzọ, California / USA. Ọzọkwa ple ...
Iouszọ Nchapu Dị iche iche nke Igwe Mgbucha Laser
Varzọ Nchapu Dị iche iche nke Mgbucha Laser Laser bụ usoro nhazi na-enweghị kọntaktị nwere nnukwu ume na njikwa njupụta dị mma. The laser ntụpọ na elu ume njupụta na-guzobere mgbe na-elekwasị anya na laser bea ...